Atụmatụ 6 iji nweta ma ọ bụ melite mkpuchi ekwentị gị | Akụkọ akụrụngwa
Atụmatụ 6 iji nweta ma ọ bụ melite mkpuchi ekwentị gị
.Nnɛ ekwentị mkpanaaka abụrụla ndị njem njem na-enweghị ike ịgụta ọnụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile, na-eme ka anyị makwa na anyị maara ha oge niile. Inwe mkpuchi ekwentị dị mkpa maka ọtụtụ n'ime anyị na mgbe anyị enweghị ya, anyị na-ata ahụhụ nke ukwuu n'ihi na anyị enweghị ike ịza ma ọ bụ kpọọ oku, mana enweghị ike ịza ozi WhatsApp ma ọ bụ chọgharịa na netwọk nke netwọkụ n'ịchọ ụfọdụ ozi n'oge ahụ. anyị nwere ike ịchọ.
Mgbe ụfọdụ enweghị mkpuchi nwere ike ịbụ nsogbu a kapịrị ọnụ na enwere ike idozi ya na usoro ndụmọdụ na-adọrọ mmasị. Zere ìgwè mmadụ, anya maka elu ihe ma ọ bụ nanị Malitegharịa ekwentị anyị ama nwere ike ịbụ ụfọdụ Atụmatụ na-adọrọ mmasị iji nweta mkpuchi ma ọ bụ melite nke anyị nwere.
Ka ị nwee ike ịnwe mkpuchi kacha mma enwere, taa anyị ga-egosi gị atụmatụ 6 iji nweta ma ọ bụ melite mkpuchi ekwentị gị. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na - eme ka ekwentị gị chọọ mma ma na - enweghị mkpuchi, gụọ nke ọma iji mụta otu esi eme ka ndụ gị ka mma n’ozuzu, nke dabere na ekwentị gị n’oge na-adịbeghị anya.
1 Malitegharịa ekwentị gị njikọ netwọk
2 Wepụ ihe mgbochi nwere ike ime
3 N'ebe dị elu, mkpuchi dị mma
4 Nnukwu igwe mmadụ agaghị enyere gị aka
5 Mee ka batrị ekwentị gị na-akwụ ụgwọ
6 Chọta ebe mkpuchi dị mma
Malitegharịa ekwentị gị njikọ netwọk
Mgbe ụfọdụ, ekwentị mkpanaaka anyị na-ejikọ na ntanetị nwere ike ọ gaghị abụ ihe kachasị mma maka ọdụ anyị na ka anyị nwee mkpuchi ekwentị kachasị mma. Otu ụzọ isi chọta ụlọ elu ekwentị mkpanaaka iji jikọọ bụ ịmalitegharịa njikọ anyị. Maka nke a, anyị nwere nhọrọ abụọ, nke mbụ na nke kachasị mfe bụ ime ka ọnọdụ ụgbọ elu nwee ike.
Site na ọrụ a dị mfe, anyị ga-ahapụ ama ama anyị n’enweghị njikọta na netwọkụ nke netwọkụ na mgbe anyị deactivating mode ụgbọ elu ahụ, ọnụ anyị ga-eme nyocha ọhụụ ọhụrụ, nwee ike ịchọta nke nwere ogo na nnweta kacha mma. O di nwute, na otutu oge a na-enweta akara ngosi kacha mma ma n'ọtụtụ ọnọdụ ngwaọrụ anyị ga-ejikọtakwa ya na mbụ, na-enye anyị otu mkpuchi ahụ, rue oge ahụ.
Nhọrọ ọzọ iji malitegharịa njikọ anyị na netwọkụ bụ ịmalitegharị ekwentị anyị, ọ bụ ezie na nsonaazụ ya na-abụkarị otu ihe ma ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ ma gbanyụọ ọnọdụ ụgbọ elu.
Wepụ ihe mgbochi nwere ike ime
O di nwute, otu n'ime ebe anyi na-enweghi obere mkpuchi na ngwa mkpanaka anyi di na ulo, obu ezie na obi oma anyi WiFi nwere ike wepu anyi nsogbu. Mgbe ị na-akpọ anyị, anyị nwekwara ike iji akara ikuku, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-adị mkpa ịnwe opekata mpe mkpuchi.
Maka nke a, ihe kachasị atụ aro bụ bie nso ire ahia ma zere ime n’ime ime ulo anyi. Ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, nnukwu ndụmọdụ anyị nwere ike inye gị bụ iwepu ihe mgbochi anụ ahụ nwere ike ịmalite, na-amalite na windo, nke ga-emeghe iji mee ka mkpuchi dịkwuo elu.
A na-ebunye mkpuchi ekwentị na ikuku na ikuku, yabụ Ihe ọ bụla nke anụ ahụ dị n’ebe ahụ, ma ọ bụ adres anyị ma ọ bụ nke ọzọ, nwere ike igbochi n’ụzọ dị mkpa. Nke a bụ otu n'ime ihe kpatara ya, dịka ọmụmaatụ, na garages anyị enweghị ụdị mkpuchi ekwentị ọ bụla ebe ọ bụ na mgbochi anụ ahụ dị ezigbo mkpa.
N'ebe dị elu, mkpuchi dị mma
Dika anyi kowara a na-ebunye mkpuchi ekwentị na ebili mmiri, nke a na-enweta n'ụzọ ka mma ntakịrị ihe mgbochi anụ ahụ enwere. N'ebe ndị dị elu, ebe ihe mgbochi anụ ahụ na-apụ n'anya ka anyị na-arịgo, mkpanaka mkpanaka ka ukwuu. Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na mpaghara na-enweghị mkpuchi, gbalịa ịchọta ebe dị elu ebe mkpuchi gị ga-abawanye n'enweghị obi abụọ.
N'ezie, n'agbanyeghị eziokwu na ị hụrụ ka ọtụtụ mmadụ buliri ngwaọrụ mkpanaka ha iji gbalịa "nwute" ụfọdụ mkpuchi ekwentị, emeghachila ihe a ebe ọ bụ na ọ naghị emetụta ya ma ọlị. Rịgo n’ebe dị elu na-emekarịrị mkpuchi ekwentị dị ugbu a ka mma, mana iwelite ọnụ anyị site na ọkara mita emeghị ihe ọ bụla.
Nnukwu igwe mmadụ agaghị enyere gị aka
O yiri ka ọ bụ ihe doro anya igwe mmadụ buru ibu agaghị enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị nweta mkpuchi dị mma. Ọ bụrụ na ọtụtụ puku mmadụ, yana ngwaọrụ mkpanaka ha n'aka, gbalịa inwe mkpuchi ekwentị kachasị mma, ọ ga-esiri ike ịnweta ya. Dịka ọmụmaatụ, na ama egwuregwu bọọlụ ebe iri puku kwuru iri puku mmadụ nọ, ọ ga-esiri ike ịnweta ezigbo mkpuchi.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahapụ ámá egwuregwu ahụ wee jee ije na mpaghara ebe ọ na-enweghị ndị mmadụ, ya mere enweghị igwe mkpanaka, mkpanaka mkpanaka ga-akawanye mma, anyị agaghị enwe nsogbu iji arụmọrụ anyị rụọ ọrụ ọ bụla.
O doro anya na ọ bụrụ na anyị nọ n'ógbè ebe ọtụtụ puku mmadụ nọ, ọ bụ maka ihe, na ịhapụ ya abụghịkarị nhọrọ, yabụ na ọtụtụ n'ime anyị, anyị ga-edozi maka enweghị oke mkpuchi. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere ike izere igwe mmadụ, zere ha iji nweta mkpuchi ekwentị kacha mma.
Mee ka batrị ekwentị gị na-akwụ ụgwọ
Idebe batrị nke ngwaọrụ mkpanaka anyị ebubo bụ ihe siri ike na n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ ihe anyị niile na-atụ aro, mana na anyị anaghị enweta ya. Ndụmọdụ a nwere ike ịdị ka o nwechaghị ihe jikọrọ ya na mkpuchi mkpanaka, mana ọ nwere ike bụrụ oge dị oke egwu.
Ekwentị anyị ma ọ bụ ama na-erepịa batrị mgbe niile, na-ebute usoro ndị ahụ kachasị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na njedebe anyị nwere naanị 10% batrị, ngwaọrụ anyị ga-ebute ụzọ dị mkpa dị mkpa na-akpaghị aka, na-ahapụ nhọrọ nke ịnweta mkpuchi ekwentị kacha mma.
Ọ bụrụ na anyị nwere ekwentị anyị mgbe niile nwere ọkwa batrị dị mma, anyị nwere ike ịnweta mkpuchi mkpanaka ka mma, ọ bụ ezie na dịka anyị kwuworo tupu nke a siri ike. N'ezie, nke mere na mkpanaka mkpanaka gị kachasị mma, ịnwere ike ibute batrị mpụga nke nwere ike ịwepụ gị oge niile.
Chọta ebe mkpuchi dị mma
Ọ bụrụ n’ị gbasoro ndụmọdụ niile anyị nyere gị n’isiokwu a n’akwụkwọ ozi ma ọ nweghị nke baara gị uru, anyị ga-anwa inyere gị aka otu ụzọ ikpeazụ nwere ike inyere gị ezigbo aka. N’ọtụtụ ụlọ ahịa ngwa dị ka Google Play ma ọ bụ Storelọ Ahịa App ị nwere ike ịchọta ngwa ndị na-enye gị ohere ịchọta mpaghara nwere ezigbo mkpuchi.
Dịka ọmụmaatụ ekele maka Speedtest na 3G na 4G WiFi Maps, site na OpenSignal, nke dị maka gam akporo na iOS, ị ga-enwe ike ịhụ ọ bụghị naanị ogo nke mkpanaka mkpanaka ị nwere, kamakwa ịchọta ọnọdụ nke antenna mkpanaka kacha nso na eserese ngosi. Nke a ga - enyere gị aka ịchọta ebe mkpuchi dị mma.
Ngwa ndị a nwere ike ịba uru n'ezie na mpaghara ebe anyị nwere obere mkpanaka mkpanaka yana nke ahụ bụ anyị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na onye ọrụ anyị nwere otu n'ime ihe ndị a na-akpọ mkpuchi nwa ojii na mpaghara anyi ma obu na anyi enweghi network 3G ma obu 4G n'ihi ihe ndi ozo.
Speedtest - Nnwale Ọsọfree
Ookla Speedtest - Nnwale Ọsọ
Nnwale Ọgba ọsọfree
Emeghe - Speedtest na WiFi Maps 5G 4G 3G
Ndụmọdụ ndị a abarala gị uru iji nweta ma ọ bụ melite mkpuchi mkpanaka gị?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Atụmatụ 6 iji nweta ma ọ bụ melite mkpuchi ekwentị gị
Xiaomi Max bụ onye ọrụ ugbu a
Otu esi emepụta akaụntụ Outlook